SIDA LOO KORO SALVIA CAJIIB AH OO KU YAAL BOGGAAGA - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Sifooyinka salvia sii kordhaya
In this article waxaan ka hadli doonaa salvia iyo noocyo, baro sida loo dhufto iyo daryeelka ee warshadda. Waxaan baraneynaa sida looga takhaluso cayayaanka salvia iyo sifooyinka daawooyinka geedka this.
Ma taqaanaa? Salvia (Salvia) oo ka timid Latin ayaa loo tarjumay "horumarinta caafimaadka." Magaca kale ee lagu magacaabo salvia waa salvia.
Noocyo iyo noocyada salvia
Salvia waxaa ka mid ah qoyska yaslingovy, oo leh qiyaastii 900 nooc oo adduunka ah. Warshad waxaa laga helaa gobollada dabiiciga ah. Salvia wuxuu jecel yahay meelaha qorraxda sida cawska, beeraha, qashin-qubka iyo jiqda fudud.
In dadka caadiga ah, dhirta daawada waxaa loo yaqaan sage, iyo ubaxyo ornamental loo yaqaan salvia. Dhirta waxaa loo kala qaybiyaa dhirta kuleylka-qabow iyo qabow-qabow.
Noocyo qabow u adkaysta waxaa ka mid ah ubaxyada sida:
1. Kalluumeysiga Salvia waa warshad qurxin ah oo ubaxyada leh buluugyada buluugga ah ee salka kala duwan ee bilowga xagaaga. Iyada oo ku saleysan noocyada this dhowr Beelood oo dheeraad ah ayaa la abuuray: Schneehugel, Rose Queen, Blauhugel.
2. Salvia Dubravnaya - warshad qabow u adkaysata, taas oo caan ku ah noocyada kala duwan ee ubaxyada casaanka iyo casaanka ah, sida: Caradonna iyo Schwellenburg.
3. Cawska Salvia - ubaxyo guduudan, casaan ah ama caddaan ah ee ubaxyada xagaaga. Kala duwanaanshaha ugu caansan waa Haematodes.
4. Salvia Mutovchataya - warshad ornamental leh midabka lilac ee ubaxa. Waxay kala-baxdaa bilaha 7aad illaa dayrta. Noocyo si fiican loo yaqaan waa roobka Dhulka.
5. Salvia officinalis - warshad qurxin iyo mid caafimaad leh.
6. Salvia buluug - warshad ornamental ah oo ubaxyada ubaxyada yar yar ah laga bilaabo Julaay ilaa bartamihii October.
7. Salvia Japanese - dhirta waxay ka timaadaa Japan iyo blooms laga bilaabo Agoosto ilaa October iyada oo ubaxyo jaalle ah.
Salvia-ka diirran waxaa ku jira noocyada soo socda:
1. Salvia marsh - dhir kulul oo jecel, wuxuu ka yimid Koonfurta Ameerika. Wuxuu koraa 2 m dhererka wuxuuna leeyahay ubax buluug ah. Ubaxku wuxuu bilaabmaa xagaaga dambe wuxuuna soconayaa ilaa iyo xilliga dayrta.
2. Salvia istiraatiijiyadeed - sannadlaha, blooms laga bilaabo Juun ilaa laga bilaabo barafka. Midabka dhirta waa orange-cas oo ah guduud mugdi ah.
3. Salvia casaanka - biennial thermophilic, oo ka yimid South America. Ubaxku wuxuu bilaabmaa dhammaadka xagaaga. Midabka - caddaan, casaan iyo casaan. Noocyada ugu caansan waa Lady in Red iyo Forest Fire.
4. Salvia Isbaanish - warshad qurxin leh ubaxyo guduudan. Ubax May iyo June. Waxay u egtahay cakshiinka waxaana loo isticmaalaa karinta.
5. Salvia budada ah waa warshad qurxin ah oo isku xiita xagaaga illaa dayrta. Midabka - midab buluug ah. Noocyada ugu caansan waa Fiktooriya.
6. Salvia Mirrtle - geedkii, waxay ka timid Mexico. Ubaxyo casaan leh ayaa lagu muujiyaa bartamaha xagaaga ilaa iyo dhamaadka barafka ugu horeeya.
7. Salvia slim - warshad dheer oo ka muuqata xagaaga dambe. Midabka - casaan. Salvia waxaa loo isticmaalaa macmacaanka ama coconavy miro, maaddaama ay leeyihiin dhadhan aan miro aan caadi ahayn. Noocyada aan la garan karin ayaa ah cagaarshaha cagaarshaha iyo siriyaalka.
8. Salvia la kariyey waa dhirta Mexican ah oo ubaxyo madow ah oo kala duwan oo lagu qarsoon yahay koob lacag ah.
9. Salvia lowska (caajiska caajiska) waa dakhliga, ubaxyada oo sii soconaya guga iyo xagaaga. Midabka - kareem-madoow, casaan ama buluug. Saliidaha muhiimka ah waxaa laga sameeyaa sheekooyinka clary, kuwaas oo loo isticmaalo daawada iyo dhirta.
10. Salvia oo caleemo saaray - Goobaha kuleylka ah ee Mexico ee ku xannibmay xagaaga ilaa xilliga dayrta. Midabka - midab buluug ah. Noocyada caanka ah waa Cambridge Blue iyo Blue Angel.
11. Buurtii Salvia waa warshad Texan ah oo ka soo jeeda xagaaga dambe ilaa xilliga dayrta. Midabka - casaan. Kala duwan Tani waa yar oo loo yaqaan bannaanka.
Salvia kordhay waa hawl fudud. Warshadani waxay jeceshahay dhul wanaagsan oo dhexdhexaad ah. Waa in la xusuustaa markaad u baahato inaad beerato sage. Waqtiga ay soo saarto salvia waxay ku xiran tahay kala duwanaanta, laakiin waqtiga ugu wanaagsan ee beerto waa Febraayo-Maarso. Salvia ubaxu wuxuu bilaabmaa 4-5 bilood kadib markii beero.
Diyaarinta ciidda iyo taangiyada beeritaanka
Si aad u bilowdo waa inaad diyaariso sanduuq ah geedo. Kuwa ugu caansan waa alwaax. Hooska waxaa ka buuxsamaa claydite iyo ciidda si ay u sii socoto illaa 2 cm ilaa kan ugu sareysa.Dabadaan ka dib, substrate ayaa si aad ah loo tolay oo daboolay galaaska, habeenkii bidixda.
Diyaarinta abuurka iyo beeridda
Waa in la xasuustaa sida si habboon loo beero miraha salvia si ay dhirta u koraan duurka qurux badan leh ubaxyo qurux badan. Shinnida Salvia waa yar yihiin, iyo inay fududeeyaan beeritaanka ay ku qasan yihiin ciid. Dhererka waxaa lagu beeray dhulka dushiisa. Ka dibna waa in lagu qooyey biyo diirran oo ka samaysan falejada loona rusheeyey lakabka khafiifka ah ee carrada 1-2 mm, ka dibna waxay ku qoyaan dhulka mar labaadna daboolaan dusha sare ee sanduuqa. Waxaa lagama maarmaan ah in la raaco heerkul ah heer-kulka - + 25 ° C.
Geedo salvia daryeel waa mid aad u fudud. Ka dib markii miraha la siiyey caleemaha ugu horeysay, sanduuqa waxaa loo soo bandhigay qorraxda. Maalin iftiin ah geedo waa 12 saacadood. Dhulku ma noqon karo mid aad u badan, laakiin waa inaanu qalalayn. Waraabinta xad dhaafka ah waxay keentaa cudurka cagaarshowga (xajmiga salka). Haddii cudurka la ogaado, ka saar dhalada iyo ciidda ku qalalan ciidda qalalan.
Dharka ugu sarreeya ee Salvia waa mid waxtar leh. Qaado qiimaheeda laba jeer ka hor inta aanad dhulka la furin. Marka geedo u muuqdaan caleemo, waxaa loola jeedaa in lagu wareeri karo dheryo gooni ah. Ka dib markii salvia transplanting ka waraabiyey, iyo dheriga waxaa lagu daboolay warqad.
Waraabinta, dhar xidhashada iyo soo qaadashada
Shaqadaada xigta waa inaad koraan geedo leh nidaam xidid wanaagsan. Tani waxay caawin doontaa Salvia si dhakhso ah u degto carrada cusub. Ha iloobin inaad soo qaadatid garaaca. Tani, geedo laba jeer dhala. Marka ugu horeysa - muuqaalka saddexda ka mid ah bogaggaas. Sprouts waxaa lagu shubaa sanduuqyada kale ee fogaan ah 6 cm midba midka kale. Mar labaad waxay dhacdaa saddex toddobaad ka dib marka ugu horeysa ee la helo. Sprouts waxaa lagu beeray dheriyo, dhexroorka kaas oo ah 12 cm.
Goorta 3-4 lamid ah caleemo muuqda, waxaa habboon in la bilaabo in la jiido salvia. Tani waxay ku siin doontaa duurka weyn. Laga soo bilaabo bishii Abriil, caleemaha waxay u baahan yihiin inay bilaabaan inay adkaadaan. Heerkulka habeenkan waxaa la yareeyey 10 ° C.
Soo degida dhulka banaan
Goorma ayay hanjabaad u tahay dhaxan guga, salvii beeray dhul furan at boos joogto ah. Salvias waxay jecel yihiin meelaha qorraxda iyo dhulka nafaqo leh. Inta u dhaxeysa dhirta, masaafada waa inay ahaataa 25-30 cm Ka hor inta aan la beeri, bacrimiya bogga soo dega leh humus. Ka dib markii laga beerto, dhirta waa in laga saaraa hab-dhiska iyo haramaha waa in lagu quudiyo Bacriminta macdanta.
Waraabinta joogtada ah ee warshadda ma aha mid u qalantaa, laakiin kulaylka xagaaga, salvia waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo la'aanta qoyaan. Haddii ay bilowdo in ay soo baxdo, sug inaad fiidkii iyo biyaha warshadda. Tani waxay ku siin doontaa isla fiirinta.
Gooyaa waxay kicisaa korniinka. Salvia si fudud u rujin, sidaas darteed waa in la gooyaa si laan ka qaadan kartaa xididka. Nidaamkan waa in la fuliyaa xilliga dayrta ama gu'ga. Iska yaree baahida caleemaha lignified, oo ka tagaya dhowr mitir oo ah burooyinkeeda iyo cagaarka dhalinyarada. Iska xeji xagal leh mindi nadiif ah. Salvia cimrigiisi waxay u baahan tahay in la baro sanad walba. Sidoo kale, ha ilaawin nidaamka noocan oo kale ah sida Salvia quusiya, maxaa yeelay taasi waxay tahay waxa ku siin doona baadiyaha weyn ee baadiyaha ah.
Ma taqaanaa? Waxaa loo isticmaalaa in haddii aad beerta beertaada beertaada, ay sii dheerayn doonto noloshaada.
Inta badan waxay iibsadaan salvia horay u koray ubax ubaxyo. Laakiin abuurku wuxuu siinayaa noocyo xiiso leh oo badan ka koray dheriga. Haddii daaqadahaagu ay iska dhaafaan koonfur-bari, koonfur-galbeed ama dhinaca koonfureed - si geesinimo leh ayey u koraan dhirtaas iyada oo gacmahaaga ah. Warshadda waxaa lagu faafin karaa afar siyaabood: by abuurka, gooynta, hannaanka hawada iyo qaybinta baadiyaha.
Kala saarista abuurka Salvia uma baahna aqoon ama dadaal gaar ah.
Waxaa lagama maarmaan ah in aan la seegin xilliga wanaagsan ee ururinta abuurka, maadaama ay si deg deg ah u dhacayaan. Sida ugu dhakhsaha badan ubaxyada hoose hoose u noqdaan brown, caleemaha loo doortay abuur ah waa la gooyaa oo la dhigaa sanduuq gaar ah oo ku saabsan Bisaylkiisa.
Inta lagu guda jiro geedi socodka taranku waa inuu ahaado mid taxadar leh oo taxaddar leh. Waa suurtogal in lagu beero geedo ka hor xilliga qaboobaha, iyo guga geedo horey u fadhiya meel joogto ah. Laakiin, nasiib daro, habkani marwalba ma soo saaro natiijooyin, maadaama miraha aan ku noolaan karin jiilaalka sababo kala duwan. Waxaa haboon in la sameeyo taranta guga iyo guriga. Si arrintan loo sameeyo, dhulka waxaa lagu shubaa sanduuq yar, iyo miraha lagu beeray. Qalitaanka bilawga ah, ka dib muuqaalka gaaban ee dadka qaangaarka ah, dheriyo yar yar oo ku habboon. Maalmaha ugu horreeya ee xagaaga, waxaa horeba suurtagal ah in la soo gooyo salvias dhalinyaro ah dhulka. Carrabku waa inuu ahaadaa bac iyo bacrin.
Waa muhiim! Salvia si fudud ayaa loo dhaafaa, markaa waa inaad ku beerataa noocyo kala duwan meelo kala duwan.
Faafinta salvia adoo goynaya maaha mid aad u adag. Tani waxay u baahan tahay gooynta gooyaa dherer ah 10-15 cm. Tani waxaa haboon in la sameeyo fiidkii. Gooynta xidhan ee weelasha biyaha, laga ilaaliyo iftiinka qorraxda. Leaves in fade on gooyn waa in laga saaro.
Roots waxay u muuqdaan laba asbuuc. Beeridda waa in la sameeyaa toddobaad ka dib marka muuqaalka asalka ah ee xididada. Isla markiiba ku dheji meel joogto ah. Maalmihi ugu horeeya waxay u fiicantahay in la gooyo dhirta qorraxda, inta badan biyo iyo buufin caleemaha.
Fikrado salvia ah qaabeynta hawada waa mid sahlan. Laanta geedka waxaa lagu riixaa dhulka waxaana lagu dhejiyaa bareeg bir ah. Xididdooyin cusub Gagaab dhowr bilood, iyo laanta waxaa laga gooyaa baadiyaha weyn. Kadibna, wadajir ahaan burooyinka dhulka, oo leh caawimo qashin, waxaa lagu beddeli karaa meel cusub.
Nidaamkan waxaa lagula talinayaa in uu qabto dhamaadka Agoosto ama horraantii Sebtembar. Noocida noocan ah waxay ku habboon tahay cimilo-duurka. Waxaad u baahan tahay inaad si fiican dhulka u qodo oo aad u diyaariso bacriminta. Xasuuso in haddii aad dhirta dhirta aad u badan tahay oo xiran tahay, duurka ayaa la jiidayaa dhererka, waxaana jiri doona ubax yar. Haddii aad dhirtid salvia dhif ah, duurka ayaa kori doona ballaca. Masaafada ugu fiican waa 45-50 cm inta u dhaxaysa safarka iyo 20-25 cm inta u dhaxeysa duurka.
Guryaha dawooyinka ee salvia
Geedo dhirta la qalajiyey waa daaweyn dhaqameed dhaqameed ee cudurada. Hase yeeshee, noocyo dhawr ah oo lagu magacaabo daawooyin ayaa leh daawooyin - daawo, nutmeg, Itoobiyaan iyo Isbanish. Noocyada kale ayaa sidoo kale leh hanti daweyn, laakiin maaha kuwa sida kor ku qoran.
Ma taqaanaa? Waqtiga cudurka, salvia waxaa loo tixgeliyey daaweynta halista ah ee daaweynta iyo soo celinta jirka.
Caleemaha Salvia waxay leeyihiin anti-barar, jeermis dilaha iyo guryaha kudheerta.
Isticmaal warshadda adoo biyo raacinaya xanuunka soo socda:
Dhiig bax iyo cudur cirrid;
Catarrh oo ah mareenka sare ee neefta.
Salvia waxaa sidoo kale loo isticmaalaa dhidid badan, macaan, sonkorowga sambabada, atherosclerosis, radiculitis iyo cudurada dumarka.
Dhakhaatiirta ajnebiga ah waxay kugula talinayaan isticmaalka sage for boogaha, xanuunka qanjirada, cudurada beerka iyo kelyaha, bararka caloosha iyo daaweynta nabarradaha nadiifka ah. Uruuri caleemaha iyo dusha sare ee caleemaha qajaarka inta lagu jiro xilliga gaduudka.
Kadibna waa la qalajiyaa oo loo adeegsadaa daawada dabiiciga ah ama soo saarista kalluunka qurxinta. Sage wuxuu leeyahay ur adag iyo dhadhan qadhaadh.
Waa muhiim! Waxaa lagula talinayaa inaadan qaadin xanuunka suuxdinta, qufac xoog leh iyo uur. Qadarka sarreeya, garaaca ayaa sababi kara xajiinka xuubka xabka.
Cayayaanka waaweyn iyo cudurrada salvia
Dhirta ornamental salvia waxay u nugul yihiin cayayaanka iyo cudurrada kala duwan. Waxaa jira tallaabooyin ka hortag ah si loo ilaaliyo dhirta. Waa inaad raacdaa xeerarka daryeelka iyo waraabinta, iyo sidoo kale samaynta quudinta. Haddii ay qalad tahay in la daryeelo salvia, markaa waxaa jira halis ah in la helo fangaska, bakteeriyada iyo fayrasyada kala duwan. Isticmaalka muddada dheer ee sanduuqyada waxay keenaysaa isku-darka dulin-ku-jira - jirada. Waxaa habboon in la xuso in guriga, hababka ciidda jeermiska, labadaba kiimikada iyo kuleyl, labadaba natiijooyin yar. Ka hor inta aan dib loo beerin dhirta sanduuqyada waa in la bedelo dhulka ka hor beeritaanka kasta. Markaa waxaad si kalsooni leh u koraan salvia caafimaad leh oo qurux badan.
Cudurada iyo cayayaanka caleemaha iyo afkoda: calaamadaha iyo daaweynta
Badanaa, caleemaha iyo cawska salvia ayaa waxyeelo leh snails iyo slugs. Dagaalka ka dhanka ah iyaga waa mid aad u fudud. Nadiifinta cayayaanka waxaa lagu sameeyaa farsamo ahaan.
Sidoo kale kale cayayaanka salvia ka dhuftey muuqaalka caleemaha iyo jirridda dhirta. Tusaale ahaan, aphid. Cayayaanka Tani waxay cunaan miir khudradda hodanka ku ah carbohydrates waxayna ubaahan tahay astaamaha amino ku jira. Xaaladdan, waxay u qoondeyneysaa tiro badan oo caano ah. Waxay soo jiidataa noocyada kale ee cayayaanka. Aphids waa mid ka mid ah cayayaanka beerta ugu waxyeelleysan. Aphid sidan oo kale:
Aphid waxay ku degtaa caleemaha waxayna nuugaan casiir ka soo cagaarka cusub. Intaa waxaa dheer, cayayaankan ayaa qaadi kara caabuqyada fayraska - meelo. Waxay daciifiyaan salvia waxayna keenaan dhimashada geedka.
Laga soo bilaabo cudurrada salvia, xayrta budada ah ayaa la kala saari karaa. Pathogens waa pseudo-fungi-oomycetes.
Astaamaha laf-dhabarku waxay la mid yihiin calaamadaha xabukuqa budada ah. Laakiin on caleemaha scurf cad cad on hoose ee caleen, iyo top ee muuqan dhibco huruud ah ama brown. Ka tagaa qalalan ama kallana.
Cudurku inta badan wuxuu ku kobciyaa dhirta oo Gagaab ah meelo qoyan. Si loo yareeyo cudurkaan, waa inaad ku buufisaa dhirta ayadoo lagu darayo daawooyinka naxaasta.
Cudurada iyo cayayaanka ubaxyada: calaamadaha iyo daaweynta
Thrips waa cayayaanka yaryar oo jecel inay cunaan dalag. Waxay ka soo galaan qolalka daaqadaha. Thrips waxay keenaan manka si ay u dhacaan una yareeyaan muddada ubax ee salvia.
Si loo hubiyo in geedka uu ku dhaco cayayaankaas, waa ku filan inuu ku dhuubo ubaxyo dhowr ah iyo ruxin waraaqda madow.
Si aad uga takhalusto cayayaankan, waa inaad qaadataa laba ama saddex daaweyn 10-kii maalmoodba mar. Tani waxay u qalantaa cayayaanka nidaamsan.
Cudurada iyo cayayaanka ee xididada: calaamadaha iyo daaweynta
Badanaa, xididdada salvia waxay ku xiran yihiin cudurro loo yaqaan "blackleg and rot rot". Cuduradaan waxaa sababa fangaska ciidda: Fusarium, Pythium ama Phytophthora.
Dhibaatooyinkaas oo kale, qoorta xididku waa la saameeyaa, iyo unugyada ayaa madow. Caleemaha si tartiib tartiib ah ayay u jeexjeexaan oo u dhintaan Salvia lafteedu waxay u dhiman kartaa afar maalmood gudahood. Goobaha Brown ee ay saameysay ayaa lagu sameeyay qaybta hoose ee qaabka salvia dadka waaweyn. Geeduhu waxay bilaabaan inay sii xumaadaan, laakiin ma dhintaan. Patches ama patches ayaa laga arki karaa unugyada saameeya. Midabkiisu wuxuu ku xiran yahay nooca cudurka. Ilaha ugu muhiimsan ee caabuqa waa carrada.
Si looga fogaado dhibaatadan, waxaa habboon in la beddelo ciidda ka hor beerashada cusub iyo quudinta geedo leh mareellooyin.
Waxaa sidoo kale jira walxo firfircoon oo bayooloji ah: narcissus, zircon iyo immunocytophyte. Tani waxay kordhisaa iska-caabbinta dhirta. Marka kalluunka uu dhaco, ku buufin carrada iyo dhirta kiimikooyinka: ka bax, rididda iyo topsin-M. Haddii aadan rabin inaad dhirbaaxiso dhirtaada kiimikooyinka, waxaan kugula talineynaa inaad waraabiso dhirta iyo ciidda leh xal casaan oo daciif ah oo ah kiniinka potassium.
Ka hortagga Cayayaanka Ka-hortagga
Ka hortagga ayaa ah habka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo salviinkaaga cudurada iyo dulin. Si arrintan loo sameeyo, waa lagama maarmaan in la doorto noocyada saxda ah ee u adkeysanaya cudurada iyo cayayaanka. Ha iloobin sida loo abuuro salvia si ay u sahlanaato in nadiifinta dhirta laga nadiifiyo. Waa inaad sidoo kale raacdaa shuruucda xaaladaha nadaafadda, nadiifinta nadiifinta iyo caleenta ama dhirta bukaanka ah waqti gaaban.
Si loo burburiyo cayayaanka ama cudurada ku yaal berrin furan, waxaad codsan kartaa mashiinka tubaakada sigaarka, adoo ku qasan 4 g oo ah saabuunta cagaaran 1 l oo ah decoction.
Hadda oo aan ognahay oo dhan salvia, oo leh niyada nabadda waxaan bilaabi karnaa in ay u koraan geedkan quruxda badan on our gaar ah guriga. Waxaan fiirineynay sida si habboon loo beero iyo daryeelka salvia, iyo sidoo kale ka bartay sifooyinka bogsiinta ee warshad this. Ha iloobin cayayaanka waa in ay noqdaan waqti gaaban.